Garawe oo lagu qabtay Rag badan oo lagu tuhmayo in Shabaab yihiin iyo Ciidamada amaanka oo … – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka ka imaanaya magaalada Garawe ee xarunta Maamulka Puntiland ayaa sheegaya in Ciidamada amaanka maamulkaasi ay gacanta ku dhigeen 15-nin oo lagu tuhmayo in ay katirsan yihiin Dagaalyahanada Al-Shabaab.
Ragan ayaa laga soo qabtay guri kuyaala magaalada Garawe, ciidamada amaanka ayaana ragan ku tuhmaya in ay xariir la leeyihiin ama ka tirsan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab , waxaana ragan lagu xiray xabsi kuyaala magaalada Garawe.
Taliyaha qaybta gobolka Nugaal Gashaanle dhexe Cabdiraxmaan Xaaji Abshir, ayaa sheegay in ciidamada amaanka ay Guriga kuyaala Garawe kasoo qabteen 15-nin oo qaarkood heesteen agabyo ciidan sida uu tilmaamay.
Waxa uu sheegay Taliyaha in ragan la qabtay ay isugu jiraan kuwa horey magaalada u joogay kuwa cusub, waxa uuna tilmaamay in ciidamada amaanka la wareegeen guriga ragan lagu qabtay ayna socdaan baaritaano lagu ogaanayo waxa ay ahayaeen ragan.
Ciidamada amaanka maamulka Puntiland ayaa adkeeyay amaanka magaalooyinka waa weyn ee kuyaala maamulkaasi, waxaana ciidamada xiliyada habeenkii ah baaritaano kasameeyaan xaafadaha kuyaala Garawe, iyagoo ka cabsi qaba in Al-Shabaab magaaladaasi ka geestaan weeraro aargoosi ah.